Poker Heat™ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.5 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（71.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Poker Heat™ - Free Texas Holdem Poker Games
Poker Phat - World Series Poker (WSOP) Poker app - PlayTiker
သင်၏အလောင်းအစားများထည့်သွင်းထားသည့် Poker ဂိမ်းများကိုတီထွင်သူများကသင့်ထံသို့ယူဆောင်လာသည့်အခမဲ့အွန်လိုင်း Poker ဂိမ်းအသစ်ကိုသင်ယူဆောင်လာသည့်အခမဲ့ပါ0င်သည့်ဂိမ်းအသစ်ဂိမ်း မော်ကွန်းလိခ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး poker app တွင်အွန်လိုင်း။ သင်၏ Texas Poker မဟာဗျူဟာကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားကိုစစ်မှန်တဲ့ VIP Texas Poker Player ကိုထည့်ပါ။ ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရန် Poker Leagues ဆယ်ခု၏ရာထူးကိုတက်။ သန်းပေါင်းများစွာသောချစ်ပ်များထဲမှအပင်များဟုဆိုသည် !! Las Vegas မှအခြား VIP ကစားသမားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအခြား VIP ကစားသမားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခြား VIP ကစားသမားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်အကောင်းဆုံး Vegas Gamers Online ကိုအွန်လိုင်းတွင်ကစားပါ။
Texas Hold'em Poker ဖြင့်အပူကိုခံစားပါ။ Poker Room တွင်သင်၏အခမဲ့ချစ်ပ်များစောင့်ဆိုင်းနေရသော Poker သည်အကောင်းဆုံးကဒ်ပြားဖြစ်သည်။
သင်ဟာ Poker ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ် Player, သင်သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Holdem တွင်ကြီးမြတ်ကောင်းရှိလိမ့်မည်, သို့သော်သင်၏ဖဲချပ်ဝေများကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့၏ Ring
ကိုပေးနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပူကိုဖွင့်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Poker လောင်းကစားရုံကိုအတွဲအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ Poker လောင်းကစားရုံကိုအတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ အခမဲ့ Texas Hold'em Poker နှင့်သရဖူများကိုအနိုင်ရရန်အပြည့်အဝမစ်ရှင်ကစားပါ။ သရဖူအလုံအလောက်ရရှိပြီးနောက်, သို့မှသာသင်သည် လက်စွပ်နှင့်ထိုက်တန်သော
ကိုရလိမ့်မည်။ သင်၏အခမဲ့ဖဲချပ်ထည်ချစ်ပ်များကိုတောင်းဆိုပါ, ဖဲချပ်စားပွဲတွင်သင်၏အကောင်းဆုံးလက်စွပ်ကို0တ်ဆင်ပြီးသင်၏အောင်မြင်မှုများကို Poker စားပွဲတွင်လူတိုင်းရှေ့တွင်ဖြိုခွဲပါ။ ယခုသင်၏အခမဲ့ဖဲချပ်ထည်ချစ်ပ်များကိုတောင်းဆိုပါ။
သင်၏ Poker မဟာဗျူဟာကိုအမှန်တကယ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ Poker Heat ၏အပူရှိန်၏ထူးခြားသောဂန္ထဝင် Pokers ဂိမ်းများနှင့်အတူပါ0င်သည့်ပြိုင်ပွဲများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်သည့်ပြိုင်ပွဲစနစ်သည်သင့်အားအပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောအွန်လိုင်း poker ခန်းများသည်အခြားမည်သည့်အွန်လိုင်း poker app ထက်မဆိုအခြားမည်သည့်အရာမဆိုအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေသည်။ 'အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်' သို့သွားရန်နှင့်လာမည့်လိဂ်သို့တိုးတက်ရန် Newbie တရားရုံးတွင်ကစားခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ Leagues 10 ခုတွင်ယှဉ်ပြိုင်ပါ, သင်၏အခမဲ့ချစ်ပ်များကိုအွန်လိုင်းနှင့်ထိပ်တန်းအဆင့်တွင်အလောင်းအစားပြုလုပ်ပါ။ အခမဲ့ဖဲကြိုးဂိမ်းများသည်သင်ကစားရန်အတွက်ဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ သင်၏လောင်းကစားပွဲတွင် Poker ပါတီသို့0င်ပါ။ Poker ပါတီသို့0င်ပါ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားသမားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု
သင်၏ဖုန်းမှဖြောင့်သောကမ္ဘာ့ဖဲကြိုးခရီးစဉ်တစ်ခုတွင်! သင့်ရဲ့ poker လက်ကိုပြပါ, ante ante, အပေါငျးတို့ညီကိုသွားသို့မဟုတ်ခေါက် - သင်၏မိတ်ဆွေများကိုဖြန်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ Poker ကစားသမားများကို outsmart! Poker စားပွဲများတွင်ဖိတ်ကြားခြင်းခလုတ်ကို နှိပ်. Poker Texas Holdem ကိုအတူတကွကစားခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Poker ဖြင့် Poker ဖြင့်ကစားပါ။ ဦးဝင်းနေ့စဉ်ဆုကြေးငွေနှင့်အခမဲ့အခွင့်အရေး
! စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်နှင့် BIG အနိုင်ရ
! အဆိုပါလိဂ်မြင့်မားလေလေ, မြှောက်ကိန်း - ဂျက်စ်! အခမဲ့ဖဲကြိုးချစ်ပ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောဆုရေကန်သည်မြှင့်တင်ရေးဇုန်တွင် League ၏ထိပ်တန်း TX Poker ကစားသမားများကိုစောင့်မျှော်နေသည်။ Poker Height ရှိ Poker ကြယ်ပွင့်များဖြစ်ရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလိဂ်ကိုရောက်ရှိရန် - အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း Texas Holdem app Online Poker ပြိုင်ပွဲများကိုအချိန်မရွေး, နေရာတိုင်းတွင်ကစားပါ။
နှင့်စိတ်ဓါတ်များ! Newbie တရားရုံးမှစတင်ပါ, အောင်ပွဲလှောင်အိမ်မှတစ်ဆင့်ကြိုတင်မဲခြင်းဖြင့်ရှေ့သို့တိုး။ ဂုဏ်အသရေလက်စွပ်သို့သွားပါ။ ကစားသမားစာရင်းအင်းများ, လက်အားခွန်အားအချက်အလက်များ, Chips Store တွင်အထူးအရောင်းအ0ယ်များကိုစျေးပေါသောစျေးနှုန်းများအတွက်ချက်ချင်းဝယ်ရန်အထူးအရောင်းအ0ယ်များကိုဈေးသက်သာစွာဝယ်ရန်။
Facebook တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ (https://www.facebook.com/pokerhead/)
နောက်ဆုံးပေါ်တပ်ဆင်ပါ Texas Holdem Poker ဂိမ်း (World Series ၏ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးအစီအစဉ်) ကိုဖန်တီးသူများကသင့်ထံပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
ဒီဂိမ်းကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသောပရိသတ်များ (21) ကိုသာရည်ရွယ်သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းအပေါ် အခြေခံ. အစစ်အမှန်ငွေကြေးသို့မဟုတ်ဆုများကိုရရန်ရီးရဲလ်ငွေကြေးသို့မဟုတ်ဆုရသို့မဟုတ်ဆုများကိုအနိုင်ရရန်အခွင့်အရေး။ ဤဂိမ်းတွင်ကစားခြင်းသို့မဟုတ်အောင်မြင်မှုသည်အနာဂတ်ကို 'တကယ့်ငွေ' လောင်းကစားခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုမဖြစ်စေပါ။
Poker Heat - သင်ခံစားရနိုင်သလား။
POKER HEAT TRYNA TO WIN #1
Free Chips Gaming
Poker Heat™ - Free Texas Holdem Poker Games 4.43.1